Kugadzira chizi chitsva uye sauteed mapichisi | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 15/08/2021 10:20 | Mapepa ane Zvibereko
Unogona kuva nazvo kwekudya chamangwanani, sechikafu kana sedanho rakareruka. Izvi Kushambadza nechizi nyowani uye sautéed mapeche izvo zvandinofunga nhasi zvinoshanda kune wese uye mutorwa. Uye zviri nyore kwazvo kugadzirira… izvozvi kuti peach iri mumwaka hauzove nedambudziko, mukuwedzera, kusarudza mamwe akaibva.
Sanganisa chizi nemichero zvinogara zvichibudirira. Icho chakanakira iyi recipe chingave chekushandisa koteji chizi, asi hachisi chigadzirwa chandingawana padhuze nepamba, saka ndakachishandisa nechikafu chakagadzirwa cheki chisina kudzikisira chekutanga. Shandisa iyo yauinayo kumba kana iwe unogona kuwana zviri nyore.
Nezve peaches, sarudza zvidimbu zvakakura. Saka neine sauté shoma uchavaita kuti vasvibiswe. Muromo wako haudiridzi here? Kugadzirira ichi toast kunongotora maminetsi gumi neshanu yenguva yako, uye chii maminetsi gumi nemashanu emubairo wakadai?
Aya mabhureki echizi nyowani uye machesi akachekwa anokwanisa kudyiwa pakudya kwemangwanani, tudyo kana kuiswa muchikafu chemangwanani.
Nguva yakazara: 10 M
Zvimedu zviviri zvechingwa (2 kana chiri chingwa chemumusha)
6 maspuniki echizi nyowani akaputsika
1 mahombe kana maviri madiki mapeche
Isu tinoshambidza zvimedu chingwa uye kupwanya chizi nyowani.
Isu tinosuka mapeche zvakanaka uye nekucheka mumakanda.
Isu tinopisa mafuta mupani yekutsvaira uye isu tinosekesa iyo peach zvikamu Kusvikira inenge caramelized.
Panguva yekupedzisira iyo kusasa nesinamoni uye nembeu uye bika 1 mamwe maminitsi.
Isu tinoisa iyo chizi nyowani pachigunwe uye pane izvi, zvikamu zvepichisi.
Isu takanakidzwa nechakachena chechi tositi uye inodziya sauteed mapeche.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Mapepa ane Zvibereko » Kushambadza nechizi nyowani uye sautéed mapeche
Mashiriplizi pizzas nebhekoni uye mozzarella